Abaphathi beBhodi yezoKhenketho yase-Afrika bathembisa ngenkxaso yabo kuMongameli omtsha waseTanzania u-Samia Suluhu Hassan
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Tourism » Abaphathi beBhodi yezoKhenketho yase-Afrika bathembisa ngenkxaso yabo kuMongameli omtsha waseTanzania u-Samia Suluhu Hassan
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • Ukwakha kwakhona • Safety • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Tanzania inomongameli omtsha, u-HE Samia Suluhu Hassan.
Umzi mveliso wokhenketho nokhenketho unethemba elikhulu ukusukela ukuba umongameli uvela kwisiqithi saseZanzibar, eyona ndawo iphambili yokuhamba kunye nokhenketho eTanzania naseMpuma Afrika.
Abaphathi beBhodi yezoKhenketho yase-Afrika bavuyisana no-HE Samia Suluhu Hassan, uMongameli omtsha wase-Tanzania
UMongameli we-ATB u-Alain St. Ange ubona umongameli wokuqala wasetyhini eMpuma Afrika njengophawu lokuqhubela phambili kwabasetyhini e-Afrika
UMongameli we-ATB u-Alain St. Ange, ovela kwi-Indian Ocean Nations Seychelles uqaphele ukuba umongameli omtsha uvela kwi-Indian Ocean Region yase-Zanzibar.
Usihlalo weBhodi yoLawulo yeBhodi yezoKhenketho ye-Afrika u-Cuthbert Ncube, umxhasi uGqirha Taleb Rifai, Mongameli Alain St. Ange. Amalungu eBhodi uGq Walter Mzembi, UZine Nkukwana, kunye noJuergen Steinmetz kwaye egameni lamalungu e-ATB bavuyisane noMongameli omtsha waseTanzania. U-Madame Samia Suluhu Hassan.
UMongameli we-ATB uSt Ange uthe: “UNkosikazi Samia Suluhu Hassan uvela kwisiQithi se-Indian Ocean saseZanzibar. Ukwangumongameli wokuqala wasetyhini kwi-Mpuma ye-Afrika kunye noMongameli wesithoba kwilizwekazi.
IBhodi yoKhenketho yase-Afrika ijonge phambili ekusebenzisaneni neTanzania njengoko ilizwekazi lilungiselela amalungiselelo exesha lasemva koCovid.
Ku-Mongameli St. Ange, oku kungena kuvuza ukuzibophelela kweZizwe eziManyeneyo kunye nemibutho yesizwe neyamazwe aphesheya ekuqhubeleni phambili ukuthatha inxaxheba kwabafazi kwiinkqubo zopolitiko, kwaye ngaphezu kwako konke, ukubandakanyeka kwabo kunyulo.
Ikwaquka amathuba okwenyani abasetyhini okungena kwizikhundla zobunkokeli. Ibhodi yezoKhenketho yase-Afrika u-Alain St. Ange uyavuya kukuba umhlaba ufumana ikamva elizinzileyo elinamalungelo alinganayo namathuba kumntu wonke.